Sawiro: Sidaan sii sheegnay, wasiirka A/dibedda UAE oo Xamar tagay + Heshiis halisa oo dhacay - Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Sidaan sii sheegnay, wasiirka A/dibedda UAE oo Xamar tagay + Heshiis...
Sawiro: Sidaan sii sheegnay, wasiirka A/dibedda UAE oo Xamar tagay + Heshiis halisa oo dhacay
Muqdisho (Caasimada Online) – Sida aan shalay xog gaar ah ugu shaacinayba, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Muqdisho kula kulmay Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Isutagga Imaaraadka Carabta Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan iyo wafdi uu horkacayo oo maanta booqasho ku yimid magaalada.
Madaxweynaha ayaa dowladda Imaaraadka Carabta uga mahadceliyey doorka wax ku oolka ah ee ay ka qaadaneyso dib u dhiska Soomaaliya iyo dadaallada xooggan oo ay bilihii dhowaa ku bixineysay Soomaaliya.
“Dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda waxaa ku weyn, abaal weyna ay idin kaga hayaan, mashaariicda qiimaha leh ee dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta ka fulinayso waddankan, waxayna taasi dhiirigelineysaa dadaalka ku aaddan dib u soo kabashada Soomaaliya ee dhinacyada nabadgelyada, siyaasadda iyo dhaqaalaha”, ayuu yiri Xasan Sheekh.
Looma sheegin saxaafadda waxyaabaha gaarka ah ee kullankaas looga hadlay, sidoo kalena looma soo bandhigin heshiisyo ay dowladaha Soomaaliya ay kala saxiixdeen oo dhowr ah.
Si kastaba Caasimada Online oo laba warbixin oo gaar ah ka qortay socdaalkan, waxaa ujeedooyinkiisa ka mid ah qorshe Khaliijka ay Soomaaliya uga raadinayaan dagaalyahanno uga dagaalama Yemen oo ka hortagga fiditaanka Xuutiyiinta shiicada ah. Halkan ka aqri warbixintaas.
Sidoo kale waxaa socda dadaal Imaaraadka ku doonayo in Soomaaliya ay uga baxaan Turkiga oo muddo caawinayey dadka Soomaaliyeed, ayaga oo lacag xaddhaaf ah u ballan qaaday Xasan Sheekh. Halkan ka aqri xogtas.